कथा : .....अर्थात् स्वत्व - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← सुनुवार भाषी कविता : न्हाँ सोःत
कविता : चढूँ नित्य आत्मीयताको उकाली →
कथा : …..अर्थात् स्वत्व
यो साँझ फेरि उस्तै भइरहेन । आजभन्दा पहिलेका साँझहरू सामान्य बितेका हुन् । र यो पनि हैन कि यो साँझ असामान्य थियो । सामान्य र असामान्यबीचको भेद मलाई खास थाहा छैन र त्यत्रो मतलब पनि छैन । यो साँझ अलिक फरक घटना भयो ।
पश्चिमी क्षितिजबाट सूर्य फुत्किएर भागेको केही समय भइसकेको छ । रमरम अँध्यारो छ । वास्तविक अँध्यारो के हो ?,यो पनि मलाई थाहा छैन । मैले केही पुराना तर क्लासिक कविहरूको कवितामा अँध्यारोलाई नकारात्मक प्रतीक बनाइएको विषय भने पढेको छु । अँध्यारो कसरी आफैँमा नकारात्मक छ ? यो प्रश्नले बारम्बार मलाई हिर्काइरहेको पनि हो । तर उत्तर खोज्नुमा खास महत्व भने मैले दिइनँ ।
यो समय मलाई अत्यन्त मनपर्छ । प्रायजसो म पुस्तक अध्ययनको समय यही छान्ने गर्छु । घाम अस्ताइसकेको तर अँध्यारोको प्रारूप भने पूरै खडा नभइसकेको र यस क्षण पुस्तकका पानाहरूमा अक्षरका गहिराइहरू नाप्नु मेरो निम्ति सर्वप्रिय विषय बन्छ । मैले जीवनका केही रहस्यहरू सायद् यही समयको छेउछाउ पत्ता लगाएँ भन्ने मेरो अनुमान हो , र जीवन रहस्यमयी छैन भने यो कुरा झुठ पनि हो । अध्ययन र सोच मेरा निम्ति एकपछि अर्को हुनु आवश्यक छ । अध्ययनमा प्राप्त विचारहरू माथिको चिन्तन सर्वशक्तिशाली स्तरको चेतना प्राप्तिका निम्ति सहायक बन्छ भन्ने मेरो अनुमान हो । तर म आजभने अध्ययनको क्रममा रहेको थिइनँ । म कतै गइरहेको छु । र यो गइरहनु कुनै एउटा दिशा ताकेर हिँडिरहनु थियो । र यी दिशाहरूसँग भने मेरा उद्धेश्य ,सोच , परिकल्पना वा गन्तव्यहरू गाँसिएर आउँथे ।
गइरहनुकै बीचतिर एक प्रश्नले मेरा कानहरूको प्वाल हुँदै मष्तिष्क छिचोलेको अनुभव भएको कुरा सत्य हो । यो आवाज केही फरक नै थियो । बाङ्गोटिङ्गो हिँड्ने सर्पको अनिश्चित गतिजस्तो अथवा कुनै तेस्रो ग्रहको हामीले थाहा नपाएको मान्छेको आवाज हो कि ? ( झैँ) ।
“तपाईँको खबर के छ ?”
“ मैले तपाईँलाई चिनिन ।”
“ तपाईँले कसलाई चिन्नुहुन्छ र ? वा मैले भन्न खोजेको कसले कसलाई चिन्न सक्ने क्षमता राख्छ र ? तपाईँले तपाईँ आफूलाई नै सायद चिन्नुभएको छैन ।”
“यो पनि हुनसक्छ कि म आफूलाई चिन्छु ।”
“ असम्भव ।”
“यो असम्भव पनि त असम्भव हुन सक्छ नि ? ”
“ असम्भव ,असम्भव छ भने त्यो पनि असम्भव हुनसक्छ ।”
“ हुनसक्छ मात्रै त हो नि , हो त भन्न सक्नु भएन नि ।”
“ यो हो पनि हुनसक्छ मात्रै हो ।”
म यो वार्तालापलाई लम्ब्याउन चाहन्थेँ । यो रहस्यमयी पनि अनुभव भइरहेथ्यो । तर यसको क्रम यहीँ टुङ्गियो । यतिखेर सम्म मैले वार्ता गरिरहेको व्यक्तिको स्वरूपसँग खास महत्व राख्दै थिइनँ । अब भने ममा त्यो उत्सुकता बढ्दै रह्यो । मैले पछाडि फर्केर हेरेँ । यहाँ कुनै शारिरीक बनावटको स्वरूप थिएन । अब भने मैले तीन छक्क खाएँ । केहीछिन प्रकृतिले वरदानस्वरूप दिएको हावा निस्तो निल्दै आँखा मिच्दै रहेँ । मेरो आँखामा समस्या पक्कै थिएन । अब मसँग सम्भाव्यताका केही अड्कलहरू बाँकी थिए ।
१.यो सब भ्रम थियो ।
२.कुनै अशान्त मृत आत्माको आवाज थियो ।
३.वा बाँकी अरू कुनै अज्ञात सम्भाव्य अवस्था थियो ।
मलाई जिन्दगी सोचेभन्दा अर्को कुनै अज्ञात सम्भाव्य अवस्था जस्तो मात्र लाग्ने गर्दछ । तर यो जीवन सोचको कुरा छाडौँ , म अर्को समस्याबाट पीडित भएको पो अनुभव हुँदै थियो ।
मलाई यो साँझले विस्मयका केही प्रश्नहरू छोडेर गयो । अब म त्यस्तै अर्को साँझ पर्खन थालेँ । म यो रहस्यको पटाक्षेपकै निम्ति बढी अग्रसर रहेँ । अर्को दिन उही समय उही दिशामा र उही तरिकाले मेरो यात्राको थालनी भयो ।
तरिका उही थियो । यो आवाज अब मेरो लागि परिचित छ । हावाको मसिनो झोक्का आयो र फेरि शान्त भयो । यही हावाकै बेगजस्तो मेरो कानका नशाहरूले आवाजको ज्ञान प्राप्त ग¥यो ।
“तपाईँमा भोक जाग्यो कि के हो ?”
“हैन म त अघाएकै छु ।”
“फेरि तपाईँले कुरा बुझ्नुभएन ।”
“नबुझ्नुको मतलब तपाईँले कुरा बुझाउन नसक्नु भएको पनि हुनसक्छ । ”
“ हो हो, यो हुनसक्छ पनि हुनसक्छ ।”
“ तपाईले भन्नुभएको भोक अर्कै प्रकारको होला भन्ने मैले अनुभव गरेँ ,अर्थात् भोजनसम्बन्धी भोक हैन ।”
“ हो तपाईँ एकदमै सही अनुमान गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईँले मलाई चिन्न वा भेट्न तपाईँमा भोक जाग्यो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा हो ।”
“यस्तो भएको हो कि भन्ने ममा पनि अनुभूति भइरहेको छ ।”
यसरी केही साँझ बित्दै गए । यस्तो वार्तालाप पनि हुँदै गयो ।
“ मेरै कारणबाट तपाईँ बेचैन बन्नु ठीक होइन ।”
“ यो त स्वभाविक छ नि हैन र ? कुनै मुठ्ठी बन्द गरेर अर्को मानिसलाई देखाइयो भने उसमा त्यसभित्र के छ भन्ने जिज्ञासा जाग्न पाउँदैन र ?”
“जिज्ञासा जाग्न पाउनु शतप्रतिशत जाहेज हो । तर त्यसभित्रको कुरा कुनै पनि तरिकाले हेर्न पाउनुपर्छ वा हेर्नैपर्छ भन्ने चिन्ता पाल्नु वा हठ राख्नु गलत हुनपुग्छ ।”
“यसलाई यसरी नै बुझौँ न यो जिज्ञासामात्र हो ।”
आजको वार्तालाप पनि यहीँ टुङ्गिदियो । मैले जिज्ञासामात्र भनेपनि त्यो बेचैनीजस्तो वा चिन्ताजस्तो बनिसकेको थियो । म पुरानै प्रमाण भन्दा अघि बढ्न सकिन । वा यो वार्तालाप पुरानै शैलीमा भयो । जब मैले पहिलेजस्तै पछाडि फर्केर हेरेँ त्यहाँ त्यस्तो कुनै मैले हुनुपर्ने ठानेको आकृति थिएन । अब ममा यी बितेका साँझहरू जस्तो आउने साँझहरू भने फरक अनुभूति दिलाउने हुने छैनन् किनकी अब मेरो यो दैनन्दिन भइसक्यो । भनूँ न एक खालको अभ्यस्तता । अब म मान्छेका समूहहरूबाट अलिक टाढा हुँदै थिएँ । साथीहरू मलाई ,यो त साइको भयो भन्दै हुन्थे । अनि सोच्थेँ –एक खालको साइको त सबै हुन् ,तिनीहरू पनि । तर मौनता मेरो अन्तिम उत्तर बन्न थाल्यो ।
अर्को साँझ ।
“यो आवाज नै होइन कि भन्ने तपार्इँ अर्को भ्रममा पर्न सक्नुहुन्छ ।”
“हैन मैले आवाज त ठम्याइरहेको छु । तर यो आवाजको साकार स्वरूप फेला पार्न सकिरहेको छैन ।”
“आवाजको ज्यमितिय आकार र ठोस स्वरूप हुन्छ भन्ने म विश्वास गर्दिन । यद्यपी यो सर्वसत्य आवाज हो ।”
“सत्य हुन त प्रमाण हुनुपर्ला नि ।”
“ अब सबभन्दा धेरै समस्या यहीँनिर भइदियो । सत्यको कुनै प्रमाण हुँदैन । सत्य त सर्वथा सत्य मात्र हो ।”
आजको वार्तालाप पनि यहीँ टुङ्गियो ।
घरमा अब म एक्लै हुन्थेँ र रहन चाहन्थेँ । गाँजा तानेर एकोहारिएका पशुपतिका कुनै जोगीबाबाहरू जस्तो मेरो अवस्थिति रहन थाल्यो । यो क्रमले परिवारका सदस्यहरू दिक्क भइरहेथे । हुन त मपनि दिक्क थिएँ । तर ममा एकखालको उत्सुकताले गाँजेको थियो ,म उही आवाजको नजिक हुन चाहन्थेँ र जिज्ञासाका केही पोकाहरू फुकाउन चाहन्थेँ ।
फेरि अर्को साँझ ।
“ मलाई लाग्यो तपाईँ कुनै फकीर झैैैँ हुनुहुँदो रहेछ । नत्र तपाईँको मप्रतिको आकर्षण यति धेरै रहन्न थियो होला ।”
“ खै यो तपाईँको अनुमान हो । त्यसले तपाईँकै विश्वासलाई प्रकट गर्दछ । यसमा मैले भन्नु केही छैन ।”
“ यो पनि हुनसक्छ कि तपाईँमा आफूसङ्गत केही अनुमान त पक्कै छ ।”
“यो त पक्कै छ ,तर मैले यो अनुभव गर्दैछु कि मैले आफूसम्मत जे अनुमान गर्दैछु ,त्यत्तिमात्र म होइन कि ?”
“तपाईँ बल्ल लाइनमा आउँदै हुनुहुन्छ ।”
“ तर म यो लाइन भन्ने कुरा बुझ्दिन ।”
“ नबुझ्न पाउनु तपाईँको अधिकारको कुरा हो ।”
वार्ता लामो हुने गर्दैन । अलिक अनौठो र जटील किसिमको मात्र हुने गर्दछ । मलाई यो कुरा अरूलाई सुनाउन पनि मन छैन । साथीहरूलाई सुनाएमा हावा गफ भन्दै उडाउनेछन् । परिवारलाई सुनाएमा परिवारको मप्रतिको चिन्ता झन् बढ्नेछ । परिस्थिति खास जटील पनि होइन । त्यो आवाजले मलाई खोज्दै आएको पनि छैन । उल्टो म बरू त्यस आवाजलाई पछ्याउँदै हिँडिरहेछु । यदी म आफू नै उक्त आवाजदेखि टाढिने हो भने सबै समस्याको. समाधान त्यहीँ छ । हुन त यो फेरि समस्या पनि होइन । म त्यस आवाजकै पछि लागेर हिँडेपनि त्यसलाई सामान्य सोचिदिने हो भने यहाँ कतै केही अप्ठेरो नै छैन । मलाई यो रहस्यको पछि लाग्न नै मन छ ।
“ कतै तपाईँलाई , म को हुँ जानकारी पाउन मन छ होला ।”
“यो त तपाईँले मेरो मनकै कुरा भनिदिनुभयो । यही कुरा त मेरो मनमा बालहठ जस्तो बनेकाले म यो आवाजलाई पछ्याइरहेको छु ।”
“ तर मैले यो बताउन जरूरी नै ठान्दिन ,यो तपाईँले आफैँ निकै सहजसँग पत्ता लगाउनु हुनेछ ।”
“ सबभन्दा अप्ठेरो कुरा म कति सम्मलाई सहज भन्ने नै पत्ता लगाउन सक्दिन । मैले असहज जहाँदेखि सोचिदिए पनि त भयो नि हैन र ?”
“ अब यहीँ त भूल छ,यदी कुनै कुरा निकै कठिनताका साथ प्राप्त भयो भने पनि त्यसबेला प्राप्त नहुनु भन्दा सहज त हो नि, होइन र ? यसको मतलब मानिसले गर्नसक्ने अन्तिम प्रयास सम्मको अवस्था सहज हो भन्ने मलाई लाग्दछ । यसर्थ तपाईँ प्रयासमा नै रहिरहनुहुनेछ भन्ने मेरो अनुमान हो ।”
“तपाईँको अनुमानलाई मेरो सलाम छ ,तर ममा बेचैनी भने बढिरहेछ । तपाईँ कुन रहस्य हो मलाई छुट्याउन गाह्रो भइरहेछ ।”
“ म रहस्यमात्र भने पटक्कै होइन । तर तपाईँले मलाई रहस्यमयी मात्र फेला पार्नुभएको हुनसक्छ ।”
म यो साँझ अलिक धेरै आशावादी रहेँ । मैले यो प्रश्नको उत्तर पाउन भने सम्भव रहेछ भन्ने कुरा बुझेँ । यो बुझाइले मलाई अर्कै खालको राहत दियो । मैले परिवारमा त्यसदिन पछिल्ला साँझहरू मध्ये निकै धेरै कुराकानी गरेँ । यसले परिवारका सदस्यहरूको खुसीमा अनौठो वेभ पठाइदियो । मेरो बालखा छोरो पनि फर्कीफर्की आएर मेरो काखमा बस्दै रह्यो । अरू दिन ऊ पनि टाढाबाट कोही अपरिचितलाई हेरेझैँ मलाई हेथ्र्यो र गुर्रर्र कुदेर उसकै आमाको काखमा गएर बस्थ्यो । यो साँझ म निकै खुसी भएको पक्कै हो ।
“ म तपाईँभित्रै छु ।”
“ मेरो म आफूसँगै वार्ता !? मैले दङ्ग खाएँ । के मेरो आत्माले पखेटा हाल्यो ?,कि यो हावामा उड्दै छ र मसँग नै वार्ता गर्दै छ ।”
“ तपाईँको कल्पनाशीलता अलिक ठोस किसिमको रहेन ,यो तरल छ र जतासुकै जसोगरि पनि बग्न खोज्छ ।”
“ ठोस हुनुको आवश्यकता किन छ भन्ने नै मैले बुझ्न सकिन ।”
“ यो आवश्यकता भर्खरै खड्किएको भने पक्कै हो । तर यसमा तपाईँको कुरा नै मुख्य रहन्छ । कसैले यस्तो भइदिनुपर्छ भन्नु उसको आशासम्मको विषय मात्र हो ।”
“ तपाईँ सही हुनुहुन्छ । यसमा मैले टिप्पणी गर्नुपर्ने खास अवस्था महसुुस गरिनँ ।”
“ यो पनि हुनसक्छ ।”
फेरि अर्को साँझ र अर्को साँझ गरी केही साँझहरू बितेको कुरा गलत होइन । एक साँझ भने वार्तालापहरू मध्ये लामो वार्तालाप भएको हो ।
“मलाई एउटा चिन्ता भइरहेछ कि तपाईँ किन यति धेरै मप्रति सम्मोहित हुनुहुन्छ ?”
“ यो सम्मोहन भन्ने शब्द यहाँ गलत प्रयोग भयोझैँ मलाई लाग्छ ।”
“ तपाईँको दृष्टिमा गलत भएको मान्न सकिन्छ । तर सत्य त सत्य हो । हरेक गलतहरू पनि त आफैँमा सत्य हुन् ।”
“ अब यहाँ केही समस्या छ कि भन्ने मेरो कुरा हो । उसोभए त हरेक सत्यहरू पनि आफैँमा गलत हुन् भन्न सकिएला नि ?”
“मैले भनिसकेँ सत्य सावित गर्न प्रमाण चाहिँदैन । तर गलत सावित गर्न प्रमाण चाहिन्छ । कुरा यत्ति मात्र फरक छ ।”
“अब यहीँनेर समस्या छ । प्रमाण के हो ? यो म बुझ्न सक्दिन ।”
“प्रमाण प्रमाणमात्र हो त्यो भन्दा पर वा वर केही पनि होइन । प्रमाण आफूले फेला पारेका मात्र सत्य हुन् झैँ लाग्छ । जस्तो कि तपाईँले मलाई फेला पार्नुभयो । यो तपाईँका निम्ति प्रमाण हो । अरूका निम्ति यसले प्रमाणको काम गर्न आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तर फेरि यो पेश गर्न सकिने प्रमाण त होइन । यसैले म सत्य हुँ । यदी यो पेश गर्न सकिने प्रमाण भएका भए म सत्य नहुन पनि सक्थेँ । ”
“ भन्नुको मतलब हरेक सत्यको पेश गर्न वा देखाउन मिल्ने प्रमाण हुन्न भन्न खोजिएको होइन त ? ”
“कुरा त्यसरी बुझ्दा पनि खास फरक रहन्न । यत्ति हो कि –सत्य सत्य हो ।”
“ ( मतलब ) तपाईँ सत्यको अर्को नाम ?”
“ यो पनि होइन ,सत्य त विशाल छ । मेरो स्वरूपले त्यसको आकारअघि कुनै ठूलो प्रभाव राख्न सक्दैन । जे होस् तपाईँको मप्रतिको जिज्ञासाका निम्ति धन्यवाद ।”
अर्को साँझ ऊसँग मेरो भेट भयो । ऊ को मतलब उही आवाजलाई बुझिदिँदा मात्र ठीक हुनेछ । यस साँझ पनि पूर्ववत ः वार्तालाप हुँदै गयो ।
“ तपाईँ समयको अर्को नाम ?”
( यसपटकको संवाद भने मैले सुरु गरेँ ।)
“ तपाईँको यो अनुमान हो भने ,यसलाई स्वागत छ । तर म समयजत्तिको साहसी र बलवान छैन । अर्थात् म सबैलाई आफ्नो कठघरामा समयलेझैँ उसैगरि उभ्याउन सक्दिनँ । तर फेरि यो समयको कहीँ न कहीँ र कतै न कतै एक हिस्सा मेरो भागमा पर्न आउँछ भन्नेचाहीँ मेरो विश्वास छ ।”
“ अब म तपाईँलाई चिन्न असमर्थ छु । मैले निकै कठिनतम प्रयासहरू भने गरेकै हुँ ।”
“मैले यो विश्वास गर्दै थिएँ कि तपाईँ हार्नुहुने छैन । सबैप्राय ः मानिस जिउनुको नाममा अनेक सम्झौताहरू गर्छन् र ती सम्झौताहरू मार्फत नै पराजित हुँदै जान्छन् । जे होस् यो मानवीय स्वभावको कुरा छोडिदिऊँ अब म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु , म तपाईँले मान्ने गरेको जीवनको अस्तित्व हुँ । अर्थात् तपाईँको स्वत्व । अब तपाईँलाई आफूदेखि कुनै अचम्म लाग्नसक्छ । तर सामान्यकृत छ कि अस्तित्व मान्छेको अहम्को सबभन्दा पहिलो प्रश्न हो । यसको आविष्कार चराचर जगतको उत्पत्ति पछि लगत्तै भएको हुनुपर्छ । तपाईँको अस्तित्व सायद् तपार्इँको पहिचानको सीमाभन्दा बाहिर केही क्षण घुम्दै थियो । अब यो तपाईँ भित्र प्रवेश गर्ने अर्थमा छ । तपाईँ अब केही क्षण दुबै हात जोडेर अलिकति झुकावमा मौन बस्नु आवश्यक छ । यसभन्दा अघि अलिकति अङ्गार घोटेर निधारमा टीकाझैँ लगाउनु होला ।”
मैले यो समयलाई उसैगरि गुजारेँ ,जस्तो आवश्यक थियो÷आवश्यक मानिएको थियो वा भनूँ जस्तो निर्देशन प्राप्त भएको थियो ।
म झसङ्ग भएँ । मबाट हरेक कुरा विलुप हुँदा पनि मलाई पछ्याइरहने सायद् यही रहेछ मेरो अस्तित्व अर्थात् स्वत्व ।
अबका दिनहरूमा फेरि तपार्इँहरूले मलाई अरू मानिसजस्तै सामान्य अवस्थामा फेला पार्न सक्नुहुन्छ । चिया पसलमा चिया पिउँदै वा तरकारी पसलमा तरकारी किन्दै अथवा …………..वा त्यस्तै, जस्तो सबैको दिनचर्या छ ।
छतिवन 0८,पावस, मकवानपुर
हाल : भरतपुर चितवन
This entry was posted in नेपाली कथा and tagged nepali sahitya, sangrahalaya, Subash Khanal, कथा, नेपाली कथा. Bookmark the permalink.
नेपाली गीत (898)
नेपाली काव्य (7,419)
छन्द कविता (98)
नेपाली गद्य (3,859)
पुस्तक अंश (22)
लेख – समीक्षा (452)
पुस्तक समीक्षा (200)
निबन्ध : नोटको नक्कल
पुस्तक अंश : कमरेडलाई कुन रुखमुनि भेट्ने ?
लघुकथा : पहिचानको यात्रा
भण्डार कोठा Select Month December 2017 (113) November 2017 (314) October 2017 (318) September 2017 (327) August 2017 (348) July 2017 (447) June 2017 (355) May 2017 (380) April 2017 (254) March 2017 (303) February 2017 (260) January 2017 (499) December 2016 (535) November 2016 (381) October 2016 (351) September 2016 (354) August 2016 (269) July 2016 (245) June 2016 (154) May 2016 (166) April 2016 (238) March 2016 (551) February 2016 (539) January 2016 (574) December 2015 (697) November 2015 (464) October 2015 (245) September 2015 (220) August 2015 (215) July 2015 (320) June 2015 (125) May 2015 (118) April 2015 (181) March 2015 (224) February 2015 (122) January 2015 (113) December 2014 (138) November 2014 (109) October 2014 (107) September 2014 (114) August 2014 (216) July 2014 (125) June 2014 (119) May 2014 (152) April 2014 (213) March 2014 (96) February 2014 (202) January 2014 (147) December 2013 (123) November 2013 (118) October 2013 (112) September 2013 (283) August 2013 (530)